Magacyada Xildhibaanada U Tartamaya Gudoomiyaha Iyo Ku Xigeenka Golaha Wakiilada Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magacyada Xildhibaanada U Tartamaya Gudoomiyaha Iyo Ku Xigeenka Golaha Wakiilada Puntland
A warsame 3 January 2014 4 April 2019
Garowe, Mareeg.com: Ilaa 4 xildhibaan ayaaa isu soo taagay xilka gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland, iyadoo doorashada gudoomiyaha iyo xku xigeenkiisa la qabanayo berri oo ku began 4/1/2014.
Xubnaha ilaa hadda la shaaciyey iney u tartamayaan xilka gudoomiyaha Golaha Wakiilada Puntland waxey kala yihiin: 1-Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xirsi, 2-Xildhibaan Siciid Xasan Shire, 3-Xildhibaan Axmed Cali Xaaji iyo 4-Xildhibaan Cabdixakiim Dhooba-daareed.
Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xirsi ayaa ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland waxaana xilkaas loo doortay sanadkii 2008, wuxuuna baarlamaanka kasoo galay gobolka Mudug.
Xildhibaan Siciid Xasan Shire, wuxuu horay u nqoday wasiirka xannaanada xoolaha Puntland, wuxuuna kamid yahay xildhibaanada baarlamaanka kasoo galay gobollada Sanaag.
Xildhibaan Axmed Cali Xaaji, wuxuu horay uga tirsanaa baarlamaankii uu waqtigiisu dhammaaday, isagoo qayb ka ah 21 xildhibaan oo dib mar kale baarlamaanka cusub, wuxuuna baarlamaanka kasoo galay gobolka Sanaag.
Xildhibaan Cabdixakiim Dhooba-daareed, wuxuu isna ka mid ahaa baarlamaaankii hore, wuxuuna baarlamaanka kazoo galay gobolka Sanaag.
Waxaa dhanka kale jira xildhibaano u tartami doonaa xilka guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiillada ee maamulka Puntland, waxaana xildhibaanadaas oo dhammaantood kasoo jeeda gobollada Bari iyo Gardafuuy kamid ah:
1-Xildhibaan C/risaaq Siciid Aadan oo baarlamaanka kasoo galay gobolka Bari. 2-Xildhibaan C/xamiid Sheekh C/salaam oo baarlamaanka kasoo galay gobolka Bari. 3-Xildhibaan Salaad Xareed Cali oo baarlamaanka kasoo galay gobolka Gardafuuy.
Qaramada Midoobay Oo Ku Baaqday Dardar Gelinta Amaanka Soomaaliya